Formaajow beesobax waxaa ka dhasha nafbax! - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Formaajow beesobax waxaa ka dhasha nafbax!
June 5, 2017 admin544
Waa bil soonqaad, bulsho soomman, baahi hayso, lagana yaabo qaarkood, in aysan xalay suxuuran, kulayl iyo cadceedi hayso, sidee damiirkiisu u siiyey, in uu kadin isugu keeno, oo ka kor ciyo? Dad oomman, oo harraad hayo, in kaliil la tubo, si qudbo jaban, erayo ka la jeeda iyo hawraarro aan ujeed lahayn loogu sheego ma ahayn wax habboonaa.
Wafdi Ka Socda Dowladda Soomaaliya Oo Gaaray Jowhar